TRUESTORY: ဆိုးသွမ်းဘောလုံး ပရိသတ်များကို ထိန်းသိမ်းရန် မြန်မာရဲများကို ဗြိတိန်ရဲ လေ့ကျင့်ပေး
ဆိုးသွမ်းဘောလုံး ပရိသတ်များကို ထိန်းသိမ်းရန် မြန်မာရဲများကို ဗြိတိန်ရဲ လေ့ကျင့်ပေး
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် (MNL) ပြိုင်ပွဲများကို ဖေဖောဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပတော့မည်ဖြစ် ရာ ဘောလုံး ပွဲစဉ်များတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များ၌ ဆိုးသွမ်း ဘောလုံး ပရိသတ်များကို ထိန်းသိမ်းရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များကို ဗြိတိန် ရဲအရာရှိများက သုဝဏ္ဏ လူငယ် လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းတွင် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့က တစ်ရက်တာ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဘော လုံး အဖွဲ့ချုပ် လုံခြုံရေး တာဝန်ခံက ပြောကြားသည်။
ယင်းလေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၁၀၀ ခန့်နှင့် ဗြိတိန် ရဲအရာရှိများ လက်တွေ့ သရုပ်ပြခြင်းနှင့် ပူးတွဲ လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၌ အသင်းကြီး အချင်းချင်း တွေ့ဆုံသည့်ပွဲများ၌ နှစ်ဖက်အသင်း ပရိသတ်များ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားတတ်ရာ ၂၀၁၃ နေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ၏ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်၌ ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် နေပြည်တော် အသင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစား ကွင်းရှိ ထိုင်ခုံငါးရာကျော် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ယင်းပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်မှာ မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ သက်တမ်းတစ်လျှောက် အကြီးမားဆုံး ရန်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပြီး ရန်ကုန် ပရိသတ်များ ကွင်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့် ဆိုင်းမှု များ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
(၂၇) ကြိမ်မြောက် SEA Games ပြိုင်ပွဲ၏ အုပ်စုနောက်ဆုံး ပွဲစဉ်ဖြစ်သော မြန်မာအသင်းကို အင်ဒို နီးရှားအသင်းက အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ပွဲတွင်လည်း မြန်မာ ပရိသတ်များက သုဝဏ္ဏကွင်းရှိ ပွဲကြည့်စင်မှ ထိုင်ခုံ များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နိုင်ငံတော် အလံများကို မီးရှို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ အစီအစဉ်ဖြင့် ဗြိတိန် ရဲအရာရှိများက မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀၀၀ ကို ယူရိုငွေ ၁၀ သန်း အကုန်အကျခံ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်းက အဓိကရုဏ်း ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနည်း သင်ကြားပေးခဲ့ သည်
Posted by Gentle Men at 8:16 AM
၉၆၉ နှင့် သံဃာများကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည့် အစီအစဥ...
ဗိုလ်ကြီးဟောင် နေမျိုးဇင်၏ လုပ်ဇာတ်
အဓမ္မ ပြုကျင့်ပြီး ဆိုင်ကယ် မောင်းပြေးဟု ယူဆရသူ ဒီမ...
သံဃာတော်များကို နဖားကြိုးတပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ဟု စော်က...
မျိုးစောင့် ဥပဒေပြဌာန်းရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လွှတ်ေ...
မင်္ဂလာရှိသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော နေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ပ...
စစ်ကိုင်းတောင် ရိုး မြစကြာကျောင်းတိုက်မှာ ရိုက်ထား...
ပြိုင်ကားအုပ်စုဖြင့် အငှားယာဉ်မောင်းအား ရိုက်နှက်ထ...
စပါးကြွေးတောင်းမယ့် ထိုင်းလယ်သမားတွေ ထွန်စက် အစီး ...
Obama နဲ့ရုပ်တူလို့ ရုပ်ရှင်ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ သရ...
လူပြောများသည့် သရဲဖုန်းမှာ Software ထည့်သွင်းထားခြ...
၅၉ (စ)ကို မပြင်ချင်တာ မြန်မာသွေးစစ်စစ်ကသာ မြန်မာပြ...
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အတွင်း တရားမ၀င် ငါးခိုးဖမ်းသည့် ထ...
ကျွန်တော်တို့ ဟာ မြို့ တွင်းအလုပ်ကိုင် သွားလာရေး...
ပြဿနာဖြစ်လာသည့်အခါ အထက်မှ ရပ်တည်ပေးမှုမရှိ၊ အနိုင်က...
ရွှေနတ်တောင် - ၀င်းရတနာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ် အမှန်
နယ်လှည့်ပါးရိုက်ဝေါဟာရက ထိုင်ရှိခိုးရမယ့်သူ ပေါ်ပြီ...
မာန်အောင် ကို ကယ်တင်ပါ
ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်းပြ ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေ ရှိဟု...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ရန်ကုန်တွင် ရှိ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းသည်မှာ ...
ထာဝရ မှန်ကန်မယ့် သစ္စာတရား
အချစ်ဆိုတာ သင်ဇာ့ဘ၀မှာ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပါလိ...
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်မှ သ...
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ရေတပ်အင်အား တိုးချဲ့နေကြ...
အင်္ဂလီဆူပူမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများအပေါ် ဆ...
သဲကုန်း သပိတ်စခန်း သတင်းနောက်ကွယ်က ဘယ်မီဒီယာ မှ ထည...
၀ိဥာဉ် ခေါ်ပြီး မဲဆွယ် တဲ့ အပေါစား စည်းရုံးရေးနဲ့ N...
မှော်ဘီ လက်နက်တိုက် ဖောက်ထွင်းမှု သံသယရှိသူကို ဖမ်း...
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ အဝေဖန်ခံနိုင်ရမည် ဟု ဦး...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဘုံရန်သူမှာ ၀ီ-ဝေ-၀...
"ဒေါ်စုအတွက် တစ်မျိုးသားလုံး ကိုယ်စား အိတ်ဖွင့်ပေးစ...
တရုတ်ပြည်မှာ ဘဏ်တစ်ဘဏ်ကို ဓားပြ ၀င်တိုက်ပါတယ်။ ဓား...
Myanmar Passport holders can travel to countries b...
အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Viber...
မှတ်တမ်း မဲ့ ပေးဆပ်ကြသူများ.
"ဘန်ကောက်တွင် ဆန္ဒပြပိတ်ဆို့ထားသည့် နေရာများကို ရဲတ...
သမ္မတ မဖြစ်နိုင်တော့ ဟု ထုတ်ပြောခဲ့သည့် ဦးဝင်းတင်က...
ထိုင်းအစိုးရ ရုံးများ ပြန်လည် ရယူရေး အဓိကရုဏ်း ရဲေ...
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကင်တပ်ကီ ပြည်နယ်ရှိ Corvette ...
We are one ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလားသီချင်းကို မော်ဒယ်ကောင...
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက တပ်မတော်မှ တရားမ၀င်သစ်များ တ...
Valentine's Day မှာ ချစ်သူကို အချိန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ခ...
National Identity Card (NIC)
Facebook တွင် ဓာတ်ပုံတင်သူများ သတိထားပါ(Facebook သ...
လှူဒါန်းရရှိထားသည်ဟု NLD ကဆိုသော ရုံးချုပ်အသစ်ပြန်...
သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု ထည့်သွင်းလျှင် အရေ...
ဂဠုန်ဦးစော မြေးမဟုတ်ဟု ဦးရဲထွဋ် တုံ့ပြန်
ကေအိုင်အေ ရဲ့သေနတ်ပြောင်းအောက်မှာ.... ဒီလောက် ခြ...
မုံရွာ ဘားကမ့် မတ်လတွင် ကျင်းပမည်
ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စန်းရီကို ပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်...
ယနေ့ မန္တလေး နန်းရှေ့ ဘောလုံးကွင်းတွင်ပြုလုပ်သော ပု...
အိုဘားမားနဲ့ ဘီယွန်ဆေး ချစ်ကြိုက်ကြောင်း ပြင်သစ် မ...
လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း ဘာတွေ ထိန်ချန်ထားခဲ့သလဲ...
မြန်မာမီဒီယာလောက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် တန် ၊မတန် ...
VLC Player သုံးပြီး ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ကြည့်...
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် နည်းပညာသစ်များ ပါဝင်ပြသမည့် ...
လူ့အခွင့်အရေးသည် တိရိစ္ဆာန်တို့နှင့် မတန်
မင်းမရှိတဲ့ နေ့တွေညတွေ - Phyo Gyi + Sone Thin Par
phyo gyi .. nout soneachit
ဘူးသီးတောင် အမတ် ဦးရွှေမောင်နဲ့ ဒီဗွီဘီ ထုတ်လွှင့်ခ...
ဦးရွှေမောင် လိမ်သမျှ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်ပြီ
ဗန်းမောက်မြို့နယ်တွင် ရှမ်းနီလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းဝ...
၅၉ (စ)ကို မပြင်ဖို့၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေထိ ၅၉(စ)ကို သတ...
ဘက်လိုက်မီဒီယာများ အမျိုးသားရေးသစ္စာဖောက် ဟု ဆို
၁၅၀၀ အချစ်တော့မရှိဘူး ၅၂၈ တော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင...
ထိုင်း ရေတပ်သင်္ဘောများ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းသို့ လာရောက်မည...
အမေရိကန် မှစက်ကြီး များဖြင့် ကန်တော်ကြီး ရေသန့် စင...
ဥပဒေနှင့် အညီ နေထိုင် လိုပါသည်”” စာတန်းပါ ဗွီနိုင်...
အောင်ဆန်းခန်းမ ၊ အောင်ဆန်းရုပ်တု နှင့် အောင်ဆန်းအေ...
အမျိုးကိုထိရင် မချိသူတွေ စုမိနေပြီ
ဆိုချီအိုလံပစ်၊ ကြီးလေးကြီး၊ လီနာ၊ ဆန္ဒခံယူခြင်းနှင...
The voice ဂျာနယ်နှင့် မိုးသု(မန္တလေး) သို့
အလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့ ၀န်ကြီး၊ စာဖတ်ခိုင်းတဲ့ ၀န်ကြီး...
မြန်မာဖက်ရှင်သီတင်းပတ် စတင်၊ မြန်မာမော်ဒယ်လောက ဝါး...
ဆိုချီအိုလံပစ်ကို ကြိုဆိုလိုက်သည့် အီရီနာရှက်ခ်
* ဘုရားကျောင်းကန်သွားမည့် အမျိုးသမီးများ သတိထားဖို...